प्रम ओलीको भारत भ्रमणबाट क–कसलाई छटपटी ?
ARCHIVE, POLITICS » प्रम ओलीको भारत भ्रमणबाट क–कसलाई छटपटी ?
काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारतले चैत २३ देखि २५ सम्म भ्रमणको निम्तो दिइसकेको छ । ओलीकै ग्राण्ड डिजाइनमा भारतले यो मिति प्रस्ताव गरेको हो । ओली पनि दिल्ली भ्रमणका लागि आतुर देखिएका छन् । तर, ओलीको भारत भ्रमणलाई लिएर चीनको टाउको दुख्न सुरु भएको छ ।
चीनले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एक ठाउँमा ल्याएर झण्डै दुईतिहाई बहुमतको नजिक पु-याइदिएको थियो । त्यसैले पनि चीन ओलीले पहिला बेइजिङको यात्रा गराउन चाहन्थ्यो । ओलीले धोका दिँदै भारततिर झुकाब राख्दै भ्रमणको तिथि मिति टुंगो लगाएपछि बेइजिङ क्रुद्ध बनेको हो ।
सधैँ भारत निकट रहेर राजनीति गर्दै आएका ओलीले फेरि पनि दिल्लीलाई चिड्याउन चाहेनन् । ओलीले दोहो-याएर प्रधानमन्त्री बन्दा आफ्नो पहिलो भ्रमणको रोजाई भारतलाई बनाएका छन् । चीनसँग भन्दा पनि भारतसँग निकटता रहँदा आफ्नो कुर्सी सुरक्षित ठानेका ओलीले बेइजिङलाई धोका दिएको भनेर विश्लेषण हुन थालेको छ ।
त्यति मात्रै होइन चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेलमार्फत दवाव दिएर भारत भ्रमण रद्द गर्न ओलीलाई दवाव दिइएको छ । ‘एमाले र माओवादी केन्द्रलाई नजिक ल्याएर वाम गठबन्धन बनाउन राजदूत लीलामणि पौडेलले ठूलो भूमिका खेलेका थिए’, एमाले निकट उच्च स्रोतले भन्यो, ‘फेरि पनि उनैलाई प्रयोग गरेर बेइजिङले भारतभन्दा पहिला चीनको भ्रमण गर्न ओलीलाई दवाव दिइरहेको छ ।’ तर, प्रधानमन्त्री ओली तय भइसकेको आफ्नो भारत भ्रमण नबिथोल्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।